Ungazilanda kanjani izinhlelo zokusebenza ku-App Store ku-iPhone X | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | | I-iPhone X, Okokufundisa namanyuwali
Ukufika kwe-iOS 11 ne-iPhone X sekusho ushintsho olukhulu kubuhle nokusebenza kwe-App Store. Isitolo se-Apple iOS senziwe kabusha kabusha lapho izindaba zomqambi nezincomo zohlelo lokusebenza manje sekuyizinto ezivelele. Kepha nge-iPhone X futhi indlela esilanda ngayo izinhlelo zokusebenza ishintshile.
Ukungabikho kwenkinobho yasekhaya kanye nenzwa yayo ehlanganisiwe ye-ID ye-ID kusho ukuthi manje ukuze sizikhombe kufanele sisebenzise ukubonwa kobuso be-iPhone X. Okubizwa nge-Face ID okuhlala kusebenza yi ophethe ukubona ubuso bethu futhi ngaleyo ndlela siqhubeke nokuthengwa kwesicelo esicele ukusilanda. Kepha sikuqinisekisa kanjani ukuthenga ukuze sigweme ukulanda okungafuneki?
Kuze kube manje, inqobo nje uma i-iPhone yethu ibinayo i-ID ye-Touch, lapho silanda isicelo okokuqala kufanele siqinisekise ubunikazi bethu nenhloso yethu yokwenza lokho ngokubeka umunwe wethu kunzwa yeminwe ehlanganiswe ngezansi nje kwenkinobho yasekhaya. Ngale ndlela, i-iPhone yazi ukuthi kwakungathi futhi yaqala ukuthenga nokulanda ngaphandle kokufaka iphasiwedi ye-akhawunti yethu. Kepha nge I-iPhone X ayikho inkinobho yasekhaya, kanjalo ukuqashelwa ebusweni yilowo ophethe ukusibona, okuthile okwenzeka ngokuzenzakalela ngokubuka nje esikrinini, okuyinto ejwayelekile lapho silanda uhlelo lokusebenza.
Ungakugwema kanjani ukuchofoza izinkinobho okuyiphutha okubangela ukulanda okuzenzakalelayo kohlelo lokusebenza? I-Apple ingeze isinyathelo kuze kube manje ebesingekho kunoma yimaphi amadivayisi: cindezela inkinobho eseceleni kabili. Lesi senzo esilula senza uhlelo lwazi ukuthi empeleni sifuna ukuthenga uhlelo lokusebenza nokuthi akulona iphutha, futhi ukulanda kuzoqala ngokuzenzekelayo. I-Apple ibingakhetha inkinobho ebonakalayo esikrinini, kodwa ikhethe inkinobho ebonakalayo yokwenza ukuthenga. Okufanayo kuya ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungazilanda kanjani izinhlelo zokusebenza nge-iPhone X
UFuck Luis akenzeli ukufuna ukugxeka, kepha izindatshana zakho zihlala zilandela leli zinga, ulilayishe ngoba kuzoba ngcono kuwo wonke umuntu.
Uma ukwenzela ukugcwalisa ekugcineni ngizoyeka ukuvakashela iwebhu
Akubona bonke abafundi abanenhlanhla ngokwanele yokuba nolwazi oluthuthukile, njengalokho okubonakala unakho. Lo mbhalo uphendula ngokuthi olunye usesho oludume kakhulu ku-google luyindlela yokulanda izinhlelo zokusebenza ku-iPhone X. Kumele sibhale izindatshana zawo wonke umuntu, kulula njengokungafundi lezo ezingakuthandi.
Akukhona ukugxeka, kepha uma yonke imibono yakho ihlale ilandela leli zinga, ilayishe ngoba izolungela wonke umuntu. Ngoba okwayizolo mayelana neTlegram X bekufanele kuphawulwe, ngaphezu kokukhombisa ulwazi olungelutho mayelana nohlelo lokusebenza.
Uma ungayithandi ibhulogi, umenywa ngokuphelele ukuthi ungaphinde ungene, kumahhala.
Lapho okokufundisa ukukhuphula ivolumu ku-iPhone X?
Yilokho engingeke ngiphinde ngingene kukho, ngiyabonga ngesimemo sakho
I-OMG, ucezu lokufundisa hahahahahahaha
Bayisigaba esibi esigxeka sonke isikhathi solwazi kubantu abangazi ukuthi singaba usizo yini kubo, kunezinhlobo zabantu abagxekayo ngoba kungani kungenjalo, uma bengenasithakazelo, abamane nje bayifunde
I-Aldof Gall kusho
Yebo, lo mbhalo ungisize kakhulu. Bengisazobiza i-apula ukuze ngicacise ukuthi uthenga kanjani. Ngiqhubeka ngivakashela iwebhusayithi yakho ebabazekayo. Ngiyabonga
Phendula ku-Aldof Gall
Kimi futhi yindatshana ebengivele ngikwazi ukuyenza, bengingayidingi, kepha ngiyaqonda ukuthi kwabaningi uma kuyasebenza, kwesinye isikhathi ngeke kukusebenzele nangezinye izikhathi, ngiyaqonda nokuthi ukubhala izindatshana njengoba kulula njengakho konke onakho Ukukubeka kuyinto entsha kuwo wonke umuntu futhi ngakolunye uhlangothi kukhona labo abahlukumezekile nge-Apple, impela kukhona okwenzekile kubo ngesikhathi besebancane futhi baya esithangamini se-iPhone ukugxeka, lapho-ke bayakhwela futhi bakhononde ngoba baphendulwe okungalungile, bengingeke ngiye kweyodwa yakwa-Samsung ukuzibandakanya nomakhalekhukhwini noma uphawu, ngaphandle kwalokho iyiselula enhle, wonke umuntu unokuthanda kwakhe futhi lokho kuhle ukuthi kufana lokho, kepha engikushoyo yilabo abaneselula yomkhiqizo we-adafsadfa futhi balinde okuthile okuzovela ku-Apple okuzogxeka, kimi banokuhlukumezeka okuthile kusukela ebuntwaneni okubaholela kulokho, ngicabanga ukuthi akufanele ukucatshangelwa futhi nokuningi ngalesi sikhathi, awudingi ukufinyelela ezikhathini ezimbi ndawo, uma ubona isihloko ukuthi usifaka kanjani …… ..uyakwazi ngoba uya kwezinye izindatshana. Ukubingelela futhi kwangathi unyaka ozayo ungaba ngenye yezinto ezinhle kuwo wonke umuntu.
Asekho amabhendi amnyama ku-YouTube: uhlelo lokusebenza lwe-iOS luzovumelanisa ividiyo nefomethi yesikrini
I-Apple iqasha abaphathi abathathu be-Amazon besikhulumi sayo sevidiyo